डिभिजन–२ काे तयारीमा रहेका ६ टिमका कप्तान के भन्छन्र ? – Vision Khabar
Loading... आजः बिहिबार, कार्तिक १३, २०७७
डिभिजन–२ काे तयारीमा रहेका ६ टिमका कप्तान के भन्छन्र ?
। १६ माघ २०७४, मंगलवार ०७:०५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । माघ अन्तिम सातादेखि नामिबियामा हुने आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ मा सहभागी हुने ६ वटै टिमले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्। डिभिजन–२ मा नेपाल, नामिबिया, यूएई, केन्या, क्यानडा र ओमानले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।